Wzọ 5 Retail Uru site na Hyperlocal Social Monitoring | Martech Zone
Rlọ ahịa na-ere ahịa na-asọmpi na ndị na-ere ahịa n'ịntanetị dị ka Amazon na Zappos. Storeslọ ahịa brik na-ngwa agha na-achọ inye ndị ahịa ha ahụmịhe kachasị mma. Traffickwụ okporo ụzọ bụ ihe gbasara mkpali na mmasị ndị ahịa (gịnị kpatara mmadụ ji ahọrọ ịbịa ụlọ ahịa ịzụta mgbe nhọrọ nke ịntanetị dị).
Egwuregwu asọmpi nke onye ọ bụla na-ere ahịa nwere karịa ụlọ ahịa dị n'ịntanetị bụ na onye na-azụ ahịa dị nso ma dị njikere ịzụta. Mgbalị ahịa ndị na-eme na ọnọdụ na-emewanyewanye ma na-enye ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ iji duru ndị na-azụ ahịa n'ọnụ ụzọ gị na ịzụta.
Gịnị bụ Hyperlocal Marketing?
Hyperlocal ahịa adịla nnọọ ogologo oge karịa ịntanetị. USB, akwụkwọ akụkọ, na ndị na-ere ahịa akwụkwọ ozi nwere ike ịchụ ahịa na ụyọkọ ụlọ na ụlọ ọrụ dị nnọọ iche iche maka nnyefe ahaziri iche. Ọganihu ngwa ngwa gaa ugbu a na hyperlocal na-ezo aka n'ikike ịbanye na mgbasa ozi n'ịntanetị ma ọ bụ mkpanaka ma chọpụta ọnọdụ ziri ezi nke atụmanya, na-enyefe ha onyinye n'oge ka ha rute ebe a kapịrị ọnụ.
Kedu ihe ahịa Omni-Channel?
Ahịa Omni-Channel na-ezo aka na nkwalite na mgbasa ozi nke a na-ejikọtara nke ọma n'ofe dịnụ na kachasị ndị ahịa iji nweta otu atụmanya ahụ. Wezụga ezigbo ụlọ ahịa mkpọsa, nkwukọrịta nso (NFC), idi nso ahia, SMS na MMS, Ngwa Ekwentị, Ahịa Email, Television, Radio, Direct Mail, Katalọgụ na ohere ndị ọzọ nwere ike iji tinye aka na nkwalite inye ndị ahịa na azụmaahịa.
Onye dị irè Atụmatụ ire ahịa ire-ere bụ isi ihe na-aga nke ọma nke ụlọ ọrụ mkpọsa. Iji teknụzụ ndị dabere na ọnọdụ iji nyochaa mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ịchọpụta atụmanya bụ ụzọ ịtụkwasị obi ma dịkwa ire ahịa nke ndị ahịa.
Omni-channel marketing na outreach dị mkpa maka ụlọ ọrụ ndị na-ere ahịa ka ọ na-ebelata ọdịiche nke ahụmịhe ahụmịhe na ahụmịhe brik na ụlọ ahịa. Ọmụmaatụ, 'Slọ ahịa Apple, imewe, ịrụ ọrụ were were, yana ndị ahịa ịnụ ọkụ n'obi toro ọrụ ha n'ịntanetị dịka iTunes, Storelọ Ahịa (ndụmọdụ), wdg.
5zọ XNUMX XNUMXlọ Ahịa Ahịa Ga-erite Uru na Hyperlocal Social Monitors
Rịba Aka Mgbe While Na-atụ Anya - Hyperlocal Social Monitors nwere ike ịrụ ọrụ dịka usoro nkwukọrịta na-arụ ọrụ ma na-agafe agafe. Ọ bụrụ na onye ọrụ tinye Tweet na ntanetị, enwere obere oge (ihe dị ka nkeji 2-3) ebe onye ọrụ na-atụ anya nzaghachi, olu, ma ọ bụ echiche na post ahụ. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ na-ere ahịa zaghachi na windo ahụ, ha ga-enweta uche nke ndị ahịa. Nzaghachi ga-eweta oku ime ihe, ma ọ bụ wulite mkparịta ụka.
Mmeri nke Onwe Onye - Ire ahia dị ire mgbe emeziri ya nke ọma ma dịkwa mkpa n’ebe a na-ekwu maka ya. Site na Hyperlocal Social Monitors, ụlọ ọrụ ndị na-ere ahịa nwere ike ịkwado mkpa nke mpaghara ahụ n'ụzọ dị irè na nke ọma, ma wulite mmekọrịta chiri anya n'etiti akara na onye ahịa ahụ.
Icheta Ndị Na-emetụta Ọchịchị - Achọpụtaghị ndị na-eme mmekọrịta mmadụ na ibe ya naanị site n'ile ha anya. Agbanyeghị, ụfọdụ Hyperlocal Social Monitors na-enye ngwaọrụ na atụmatụ ndị dị mkpa ga-enye nghọta miri emi banyere onye ọrụ mgbasa ozi ma ọ bụ ndị ahịa. Klout ọtụtụ, ndị na-eso ụzọ, ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ ndị enyi bụ ihe dị mkpa iji gosipụta ahụmịhe onye ahụ mgbe ha na-azụ ahịa. Influencegwọ ọrụ na-akwụ ụgwọ ga-abụ ụzọ kachasị mfe na nke kachasị mma iji gakwuru ndị ahịa obodo ọhụrụ ma nye ikike ikike na mpaghara.
Ebe a na-ere ahia bu Igodo - Ndị ahịa na-eji mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ha rute ụwa iji nweta echiche maka ihe ha chọrọ ịzụ. Na-agba ume ịzụta, site na ịkekọrịta ahịa maka ụbọchị ahụ, ma ọ bụ ihe nkwụghachi ụgwọ a natara… wdg onye ahịa ga-enwekwu mkpali ma nwee ike ịzụta ihe ahụ. Ndị ahịa anaghị ama mgbe niile banyere nnukwu azụmaahịa, na maka ịmara ha ga-eme ha obi anụrị ma wulite ezi ntụkwasị obi na ụdị a.
Tụọ ihe ịga nke ọma - Ole na ole Hyperlocal Social Media ngwaọrụ na-enye ọrụ nke na-enyere ndị azụmaahịa aka ịlele ọganiihu nke usoro mgbasa ozi mmekọrịta ha. Ma ọ na - etinye CRM, BI, ma ọ bụ na - ejikọ data mgbasa ozi mmekọrịta (mmetụta, mmetụta, iru) na usoro azụmaahịa, ha niile ga - ekwe omume ugbu a site na teknụzụ na - aga n'ihu - dịka API na igwe ojii.
Banyere WeLink Hyperlocal Social Monitoring
WeLink's arụ ọrụ nlekota oru mmekọrịta, WeLink Social, ezubere iji nweta usoro ndu ọgbọ geo-ọnọdụ. Ebumnuche anyị bụ ịchọta ndị na-ege gị ntị ọ bụghị naanị site na isiokwu, mana ịchọta ndị na-ege gị ntị na ọnọdụ, ma ọ bụ mpaghara, nke mmasị.
Iji WeLink Social si geo-fencing ngwaọrụ nlekota oru, onye na-ere ahia nwere ike itinye ntanye n'elu ebe ntaneti mkpọsa ahụ, setịpụrụ radius nke mmasị, ma nweta akụ nke data mgbasa ozi nke nwere ma isiokwu nke mmasị na ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi ndị nọ nso.
Onye na-ere ahịa nwere ike inyocha mmetụta, mkparịta ụka, nyocha na foto ebugo na mpaghara mgbasa ozi mmekọrịta site na netwọkụ dịka Twitter, Instagram na Foursquare. Ikpo okwu a na-enye ohere isoro ndị ahịa nwere mmasị kpakọrịta site na ịnye ha ihe mkpali - ma n'ụdị Kupọns, ego, ndụmọdụ ma ọ bụ ozi - ịga leta ebe ahụ.
Tags: data cellularhyperlocalhyperlocal ahịaụlọ ahịa hyperlocallocalahịa dabere na ọnọdụMobile na Mbadamba ụrọdata ekwentịmobile data-NgwuputaNathan chandrana nso nso nkwukọrịtanfcomni-ọwa ahịanso nsoidi nso ahiaahịa ahiaụlọ ahịa na-ere ahịaSocial Media Marketingsolomochere